Ukuhlaziya ukunyuka kweenwele
Ukuxilwa kweNtloko ukukhuthaza ukukhula kweenwele kuyasebenza kakhulu, kwaye ukufaneleka kwalolu hlobo kubandakanya uluhlu olude. Ngokomzekelo, ukuxiliswa kwentloko kusetyenziswe kakuhle kwesikhumba somileyo esomileyo seborrhea. Impembelelo yokusila, ngokuqinisekileyo, ayiyi kuba yangoko, kodwa ukuba uyayicoca ngobuncinane inyanga, umphumo oyifunayo uya kufezwa ngokuqinisekileyo. Kufuneka kuphela ukuba ingqalelo ukuba iiseshoni zokuxilisa kufuneka zenziwe rhoqo imihla ngemizuzu elishumi. Ukuxilwa kweNtloko kungenziwa ngeendlela ezahlukeneyo.
Intloko yokusilalisa usebenzisa inqatha evamile
Iibhulabhu zeenwele azibizwa nje ngokuba "ukuhlalisa", kuba zenza imisebenzi emibini kanyekanye: zidibanisa iinwele zazo zize zihlambe i-scalp. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kule njongo kulunge ukuba ungasebenzisi i-brush ngezinyo zentsimbi, kuba akugcini nje ukuphuka izinwele, kodwa kungonakalisa isiqhekeza. Eyona nto ingcono ibe yinto ephangaleleyo yeplanga okanye ibrashi eneemvelo eziqhelekileyo.
Ukuze wenze i-massage, kufuneka ujikezele ikhanda lakho phambili kancane, uze ulibethe. Ukuhamba kufuneka kuvela kwintloko yentloko ukuya kwisithsaba, ngoko ke kwiitempile ukuya kwithsaba kunye nendawo engaphambili. Emva koko isithuba sitshintshile: intamo iqondiswe kwaye ikhanda litshintshwe kancane. Ngoku kuyimfuneko ukuhamba kwinqanaba ukusuka ebunzini ukuya kwi-vertex, ukusuka eetempileni ukuya kwi-nape, ukusuka kwietempileni ukuya kwi-vertex nakwi-vertex ukuya kwi-nape.
Ukuxiliswa kweNtloko ngoncedo lokutshiza iinwele
Ngokumangalisayo kukuba, kunceda kakhulu ukuqabhula izinwele zakho ngezinye izihlandlo. Kubalulekile kuphela oku kungabi ngaphezu kwalo. Ukuba ubamba iinwele ngokukhawuleza, aziyi kubalimaza, kodwa ziza kubangela ukukhwela kwesikhumba segazi.
Uboya obuncinci beenwele bukhishwe kwaye bufakwe ngeminwe emithathu: inqabileyo, phakathi kunye nenkulu. I-strand nganye kufuneka iqhutywe yi-jerks emfutshane, kwaye uqhubekele kwi-strand elandelayo. Kwizenzo ezinjalo akukho nto inzima - yonke into ilula kwaye iyaqondakala. Umphumo omhle unokufumaneka xa omnye okanye ezimbini ngeveki ukwenza nantoni na enomdla (emva kokulandelelana). Ngokomatshini, umzekelo, unokusebenzisa ioli yeoli kunye nobuni lweqanda okanye i-gelatin.
Ukuhlambalaza ngokuxuba isikhumba sakho ngeminwe yakho
Enye yeendlela eziphambili zokukhuthaza ukunyuka kweenwele yempembelelo kwesikhumba somnwe. Ukuxubha kufuneka kwenziwe ngokuncinci. Kungcono ukuqala ngamaphuzu asebenzayo, atholakala entanyeni kufuphi nomgca wokukhula kweenwele kunye nasemva kweendlebe. Kucetyiswa ukuba kungekudala ukuqhubela iminwe yakho emva nangaphandle, kodwa ukwenza ukuhamba kweetyhula ngexesha lokugaya, ukuhamba ngokuthe ngcembe ukuya phezulu kunye namatempileni, uze ube kwicandelo eliphambili.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukuxubusha ulusu ngeminwe kukhuthaza umsebenzi weengcungcipheko ezihlambulukileyo entloko, kwaye ngoko ke iinwele emva kweseshoni yokudibanisa okunjalo ziba zi-greasy. Ngoko, emva kokusilalisa kufuneka uhlambe iinwele zakho. Ngendlela, endaweni ye-shampoo esuka kwisitolo ungasebenzisa i-soda eqhelekileyo. I-Soda yayisetyenziswe ngabagogo kunye nogogo-makhulu: bebazi izixhobo zayo kwaye bazi ukuba kufuneka kusetyenziswe nini, kwaye ngoko ke basebenzise ngempumelelo i-soda ukunika ubuhle kunye nempilo kwizinwele zabo.
Intloko yokusilalisa ukukhuthaza ukukhula kweenwele kunye nethawula elifudumeleyo
Xa intombazana yenza i-hair mask, ngokuqhelekileyo ibeka iiplastiki kwiinqwelo zakhe, ize ihlanganise intloko yakhe kwilinen. Oku akukwenziwanga nje: izinto ezincedo ekutshiseni zixutywa yi-scalp kunye neenwele ngcono. Kungenxa yesi sizathu sokuba xa usebenzisa i-massage yekhanda, kusebenza ngokufanelekileyo ukusebenzisa itiliti evuthayo.
Ithawula ngaphambi kokuba inkqubo ibhekiswe ngetheyile yomlilo eshushu okanye kwibhetri, ize iphonswe phezu kwentloko. Ukudibanisa kwentloko kuqhutywa ngendwangu efudumele kunye neminwe yeminwe. Iskimu sokusilalisa siyafana nokuchazwe ngasentla. Unako ukudibanisa le massage kunye nesondlo esinomsoco, umzekelo, kwi-burdock okanye kwioli yeoli. Okokuqala, hlalisa intloko, uze usebenzise imaski enondlayo. Emva kokufaka i-mask masitrient, intloko kufuneka iphinde ifakwe kwilinen efudumeleyo, ngoko ihamba malunga nemizuzu engamashumi amathathu ukuya kwamashumi amane, ize ihlambe iintloko zamanzi afudumele kunye ne-shampoo eqhelekileyo.
Izindlela zokuphelisa iimbangela zokulahleka kweenwele
Unokuthintela ukuthintela njani iinwele
Indlela yokukhetha unwele olufanelekileyo lweenwele kunye neenwele
Ukukhanyisa ekhaya: indlela yokulungisa kakuhle iinwele nge-hydrogen peroxide
I-shampoo efanelekileyo kakhulu yeenwele
Umfutho we-broccoli kunye neentlobo ezintathu zeeshizi
Ungayilahla njani isisu sebhiya?
Indlela yokwenza ube ngumbindi wengqalelo yomntu?
Izicathulo eziphathekayo 2009
Amakhadi kunye nemifanekiso yoFebruwari 23, 2018 kunye nabo basebenza emsebenzini
Ukulimala komlenze kunye nentambo yomthambo
Izizathu ezi-10 zokunyamezela kwakho rhoqo
Indlela yokutya ngokufanelekileyo, ukuze ungakhuli
Unxibelelwano kwi-intanethi, ubudlelwane obunjani
Umphumo ozuzayo we-cryosauna emzimbeni
Yintoni enokuyenza xa umntwana echaphazela izitho zangasese
Ukuba umntwana uyaba noogqirha